Amulet angaphezu kwaNdalo e-Abraxas ukulawula ubomi bakho kunye nemimoya- Ihlabathi lamaAmulets
Ikhaya > Amandla e-Abraxas Amulet ukulawula ubomi bakho kunye nemimoya yeOlimpiki
Amandla e-Abraxas Amulet ukulawula ubomi bakho kunye nemimoya yeOlimpiki
Xabiso rhoqo € 19 Intengo yentengiso € 25 Ixabiso lento /nganye
Rhafu lufakiwe. Ukuhambisa ngenqanawe kubalwa kwi-checkout.
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo -Akukho kusebenze-- € 19 Yenziwe ngentsimbi eshayinayo- yenziwe yasebenza- € 29 ISterling yesilivere-Akukho kuVuselelwa- € 42 ISterling Silver-yenziwe yasebenza- € 54
I-Magical Amulet Abraxas Talisman ilawula ubomi bakho kunye nemimoya yeOlimpiki
Olu luyilo olukhethekileyo ludibanisa i-7 Genii enamandla kunye ne-AX yokuchithwa kwe-Abrasax okanye i-Abraxas ukwenzela ukukhuselwa kunye namandla.
Ingenza ntoni le nto yokuphumla?
• Ngaba usokola kwishishini lakho okanye emsebenzini?
Ngaba ukungakufumani ukunyuswa komsebenzi obusebenzela nzima kangaka?
• Umphathi wakho akakuboni?
• Abathengi bakho abayihloniphi?
• Akukho mntu ungena kwivenkile yakho?
• Ufuna ukuthatha ishishini lakho kwinqanaba elilandelayo, kodwa uziva uvinjelwe?
• Ngaba ukufumanisa kunzima ukufumana uthando lobomi bakho?
• Ngabahlobo bakho abathandi?
• Usapho lwakho alikukhathalelanga?
Ngaba abantwana bakho abakuboni?
• Umfazi / umyeni wakho akasakujonganga ngamehlo afanayo?
• Ngaba uyadlala i-lottery kodwa awunalo ithamsanqa?
• Ukudlala amakhadi nabahlobo bakho kwaye usoloko ukhulula?
• Akukho thamsanqa kuwo nawuphi na umdlalo?
Ukuziva ubumbekile ngalo lonke ixesha?
• Ayikonwabisi impilo yakho yesondo?
Ngaba uziva ngathi ubomi bakho buyehla?
• Akukho kukhanya ekupheleni komjelo?
• Utshiswe ngokwasemphefumlweni?
Ngaba awuboni ndlela yokuphuma?
Ngaba uziva uvaliwe ngokupheleleyo?
Akukho mntu unokukunceda?
Ungathanda ukuthatha ishishini lakho liye kwinqanaba elilandelayo
• Ukukhangela imali?
• Ukukhangela udumo?
• Ngaba ufuna imali engakumbi?
• Ufuna ikhontrakthi entsha?
• Ufuna ukwaziwa?
• Ngaba uyimovie?
• Ngaba ungumphembeleli we-youtube?
• Sombulula iingxaki nosapho lwakho?
• Ufuna imali yokongeza?
• Ufuna imali yemoto, iholide, isipho?
• Abathengi bakho abayihloniphi '
• Akukho mali ishiyekileyo ningekafumananga ekupheleni kwenyanga?
Zonke ezi zinto zinokusonjululwa ngulo mnxongo we-Abraxas okhethekileyo
Amagunya eMimoya yeOlimpiki:
Amagunya IArathron ugweba uSaturn noMgqibelo ukuba unokuguqula into into elityekeni ngomzuzwana, nokuba isilwanyana okanye isityalo, ukugcina into efanayo kumbono. Uguqula ubuncwane abe ngamalahle, kwaye amalahle angene ebuncwaneni. Unika ubungqina obunamandla. Ufundisa u-Alchemy, Magick, kunye noFickick. Uyazivumelanisa nemimoya engaphantsi kwamadoda. Ulawula ixesha kunye nokufa. Ufundisa uMama, ukhusela ikhaya lakho, uncedisa ukwakhiwa nokwakhiwa kwaye uqinisekisa ukuvunwa okukhulu kwaye ukhusela izibetho
Amagunya Bethor Jupiter kunye noLwesine uBethor ulawula ezo zinto zichazwe kuJupiter: kungekudala uza kuthiwa. Lowo ohloniphekileyo nomlingiswa wakhe, uvuselela izidima ezivulekileyo, ukulungelelanisa ubuncwane obuvulekileyo: uxolelana nemimoya yomoya, ukuba banike iimpendulo zinyani, kwaye benza amayeza asebenze ngokumangalisayo ngempumelelo. Unika ubulungisa, unike ubulumko. Ukhangisa ubuninzi, kwaye udala umyalelo
Amagunya Phaleg lawula iMar noLwesibili uPhaleg ulawula ezo zinto ezibhekiswe kuMarta, iNkosana yoxolo. Umntu onempembelelo kaPhaleg uvuselela ukuhlonipha okukhulu kwimicimbi enjengemfazwe kodwa angasetyenziselwa ukufundisa izakhono zobuchwephesha, uMsebenzi weMigcisa oLungiswayo, ukunika amandla kunye noMbane, ukukhusela ububi kunye nokukhusela okukhuselekileyo
Amagunya Och Ilanga elilawulayo neCawa Och lilawula izinto zelanga; unikeza impilo epheleleyo kwaye ifundisa ukuphilisa kunye namayeza apheleleyo; Unika ubulumko obuninzi, unikela iMimoya ephezulu kakhulu. Unika ubutyebi obungenangqondo,
Amagunya Hagith uVenus olawulayo kunye noLwesihlanu uHagith ulawula izinto ezinomdla. Utsala uthando, unika isini esingakholelekiyo, ukhuthaza ubuChule kunye noGrace, ufundisa ukwenza umculo omnandi kunye nobugcisa. UHagith ukunika uvuyo kwaye Ubuhle kwaye bunxibelelana neNdalo omoya
Amagunya UOphiyeli Ulawulo lweMercury noLwesithathu u-Ophiel lufundisa bonke ubuGcisa: ukwandisa uLonxibelelwano, uncedisa ngezoRhwebo nokuBhala, ukwandisa iMici yakho kunye nokuthumela izithunywa
Amagunya Phul Inyanga yokulawula kunye noMvulo uPhul ulawula i-Underworld, ufundisa u-Witchcraft kunye ne-Divination, yenza ube nekhono ekuzingeleni nasekuncedeni ukubeletha
Ububanzi bependant: 35mm - isilivere ebunjiweyo okanye intsimbi engenasici
Jonga ividiyo yale khubalo
Onke amakhubalo ethu kunye neeringi zinokukhetha ukwenziwa ukuba zingcwaliswe kumniniyo. Oku kuthetha ukuba sibopha amandla kwi-amulet okanye iringi kwaye sisebenzise i-amulet yomnini.
Oku kwenziwa ngexesha leentsuku ezi-1 ukuya kwezi-5 kuxhomekeke kuhlobo lwekhubalo nakwikhalenda yamandla ekhethekileyo esiyibambe koku.
Iseshoni ekhethekileyo yokucoca kunye nokutshaja yenziwa yinkosi yethu.
Ungakhetha oku kukhetho.
Kwezinye zokukhusela kwethu unokukhetha ukhetho lwesitshixo sentsimbi endaweni yekhubalo elinxitywayo. Lo ngumbuzo nje wokhetho lomntu.
Ukwenza kusebenze kufuneka usithumele igama elipheleleyo, umhla wokuzalwa kunye nesixeko sokuhlala somntu oza kusinxiba. Ungazifaka ezi nkcukacha kwinqaku xa u-odola okanye usithumela kuthi ngo-whatsapp okanye nge-imeyile.
SIKHATHALELE, NGABA NAWE
Ihlabathi lamakhubalo linikela nge-1 € kuyo yonke iodolo eyenziwe kwivenkile yethu kwizizathu zokunceda abantu. Sikhathalele uluntu lwethu kunye nendalo. Uya? Ngokuthenga kwihlabathi lamahashe unceda abantu kwihlabathi liphela. Joyina injongo yethu namhlanje. Unokufumana ulwazi oluthe kratya apha
Zonke izinto ezithunyelwayo zinenombolo yokulandela umkhondo eya kuthi ithunyelwe kumthengi ngexesha lokuthunyelwa kwemveliso.
Unokulandela iodolo yakho apha: Indawo yokuKhangela
Ukuthunyelwa kunokuba nokulibaziseka okuncinci ngeli xesha lobhubhane kwaye ngexesha leeholide zalapha ekhaya ngenxa yenani elikhulu leodolo esizithumela yonke imihla
Zonke izinto ezithunyelwayo zenziwa yinkampani yekhuriya oyikhethileyo ekuphumeni. Ukuhanjiswa okuqhelekileyo kusimahla eSpain. Ukuthunyelwa ngaphandle kweSpain yi-7 kuphela yee-euro ngaphandle kwenyuselo apho ukuhambisa kungasimahla.
Sonke singasebenzisa ixesha elongezelelweyo. Ukuba into yakho entsha kunye ne-unorn ayonelisekanga nge-100%, uneentsuku ezingama-30 ukusuka kumhla wokuqala wokuhambisa ukuze uyibuyise. Ukulungela ukubuya, into yakho kufuneka ingavalwanga, inganxitywa, kwaye ikwimeko efanayo naleyo uyifumeneyo. Kuya kufuneka ukuba ibekho kwimpahla yokuqala.
Siza kusiwa ixesha elingakanani isicelo sam?
Ixesha lokuhambisa ngenqanawa lixhomekeke kwindlela oyikhethileyo ekuphumeni. Sinikezela ngeendlela ezi-2 ezahlukeneyo zokuhambisa ngenqanawa. Eyokuqala yi-DHL ehambisa iphakheji yakho kwiintsuku ezi-2 ukuya kwezi-6
Enye indlela yokuthumela Imeyile eQinisekisiweyo yeHlabathi. ESpain ihlala ifika malunga neentsuku ezi-2 ukuya kwezi-6 kodwa ubhubhane unokubangela ukulibaziseka kweentsuku ezimbalwa
Ngaphandle kweSpain iodolo yakho iya kusiwa kwiiveki ezi-2 ukuya kwezi-4, kuxhomekeka kwindawo okuyo. Ulibaziseko lunokwenzeka ngenxa yesiko okanye indlela ubhubhane oluchaphazela ngayo inkonzo yakho yeposi yendawo. Ukuhanjiswa okusemgangathweni kuthunyelwa ngeposi eqinisekisiweyo yamazwe aphesheya.
Unokukhetha indlela oyikhethileyo yokuthumela xa uphuma
Iindlela zokuhlawula ezikhoyo kwiwebhusayithi yethu zezi zilandelayo:
Onke amakhadi amakhulu etyala
I-Bizum (yabathengi eSpain kuphela - thumela kwi-nº 667520280-AKUFUMANEKI ukuba awungomhlali waseSpain
Yonke imicimbi iya kwenziwa kusetyenziswa ukubethela kunye neeseva ezikhuselekileyo
Asiyamkeli intlawulo xa sihambisa
Simi kwiimveliso zethu kuba siyawazi umsebenzi i-100%. Kwiimeko ayibangelwa ikakhulu kukusetyenziswa gwenxa. Jonga i-FAQ yethu malunga nemiyalelo yokusebenzisa ii-amulets kunye neeringi- Cofa apha ukuze ufumane i-FAQ
Yabelana ngalo Mkhiqizo